မြန်မာတိုင်းရင်းဆေး – Myitter
ရုတ်တရက် သွေးတိုးနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ခေါင်းမူးခြင်း ၊မျက်နှာအစ်မို့ခြင်း ၊ ဇက်ကြောထိုးခြင်း များ ခံစားရပါတယ် ။ သွေးပေါင်ချိန် အများကြီးတက်နေတာဟာ အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အထိကို အန္တရာယ်ရှိပါတယ် ။ ဒီလို မိမိကိုယ်ကို သွေးတိုးသည်ဟု သိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ လိုပါတယ် ။ အဲ့ဒိအတွက် ဆေးသောက်စရာမလိုဘဲ […]
#ညောင်းညာကိုက်ခဲမှုများအတွက်အုတ်ခဲဆွဲပါ #ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်) ဆေးထိုးဆေးစား၊အနှိပ်အနင်းမလိုဘဲလက်တွေ့သက် သာပျောက်ကင်းစေသောနည်းလေးအား တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ကိုယ်လက်ညောင်းညာကိုက်ခဲသူများ၊ဒူးနာခါးနာသူများ အတွက် လွန်စွာအသုံးတည့်ပါသည်။ (၁) ကုတင်တစ်လုံးပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်အိပ်ပြီး ပုဆိုးတွင်အုတ်နီခဲကျိုး(၁)လုံး(သို့) (၂)လုံးကိုလိပ်ပြီး နဖူးကိုချိတ်ဆွဲပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (၂) ခါးပတ်ပြားကြီးကြီး၊ကြိုးပြားကြီးကြီးများဖြင့်လည်းဆွဲနိုင် ပါသည်။လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်တန်းထားပြီ ခြေနှစ်ကိုစုထားပါ။ (၃) မိမိခန္ခာကိုယ်ခံနိုင်ရည်ရှိမည့် အလေးချိန် အတိုင်းအတာ ကိုဆွဲကြည့်ပါ။ (၄) ဒူး၊ခါး၊တစ်ကိုယ်လုံး […]
ကွမ်းဂျိုးကိုငွေကုန်ကြေးကျမများပဲ ဖယ်ရှားနည်း ကွမ်းယာအစားများပြီး ကွမ်းဂျိုးတက်နေပါကအောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပါ…။ ဖရဲသီးမှအဖြူသားအနည်းငယ်ကိုယူပါ….။ ရေ (ရေနွေးကြမ်းခွက်)… တစ်ခွက်နှင့်အတူဆူပွက်အောင်ပြုတ်လိုက်ပါ…။ ထိုရေကိုအနည်းငယ်အအေးထားပြီးသောက်ပါ..။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ..ကွမ်းဂျိုးများဆီးနှင့်အတူပါလာပါလိမ့်မည်…။တစ်ပတ်…နှစ်ကြိမ်ခန့်။ ထိုရေကို(၁၀)မိနစ်ခန့် ငုံထားပြီးသွားတိုက်ပါက သွားများရှိကွမ်းဂျိုးများပျောက်သွားပါလိမ့်မည်..။ တစ်ပတ်လောက်ထိုကဲ့သို့အသုံးပြုကြည့်ပါ..။ တစ်နေ့….(၂)ကြိမ်ခန့်….. ဖရဲသီး​ပေါ်ရံကအဖြူ သား​တွေကို.. ကွမ်းတယာစားတာ​လောက်​ကြာ​အောင်​ဝါးပြီးငုံထားလိုက်​ပါ….ပြီးရင်​သွားတိုက်လိုက်​ပါ..အနည်းဆုံး၃ရက်​မှ၇ရက်​​လောင်​ထိလုပ်​ကြည့်​ပါ… ကွမ်းဂျိုး​တွေကိုဖယ်​ရှားသွားပါလိမ့်မယ်​…။ကျွန်​​တော်​လက်​​တွေ့အသုံးပြု​ ​နေတာပါ….. crd#ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း စေတနာမေတ္တာအရင်းခံဖြင့် ထပ်ဆင့်မျှဝေပါသည်. ================ […]
၁၀ မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်သွားစေမယ့် တရုတ်ရိုးရာ သဘာဝအိပ်ဆေး အိပ်မပျော်မျက်စိကြောင်ခြင်းဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ အရှေ့တိုင်းဆေးဝါးဖြင့် ထိရောက်စွာ ကုသနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအိပ်မပျော်မျက်စိကြောင်ခြင်းကို ပျောက်ဆုံးသွားစေမယ့်နည်းကြောင့် အိပ်ဆေး ဆေးပြားများပါ မေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်ရိုးရာဆေးဝါးတွေဟာ သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အဓိကပြုလုပ်ထားတာကြောင့် အလွန်အမင်း ထိရောက်ကြပါတယ်။ ဒီအင်မတန် အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ရေနွေးကြမ်းက […]
ထိုသူပြောပြသော အနာဆွေးအနာအိုကြီးအတွက် ဘောစကိုင်း
ဘောစကိုင်းပင်ကို အဝေရာဟုလည်းခေါ်၏ သိသူတို့အကျိုးကများလှ၏။ အကြောင်းကရှိ၏ပျောက်ကင်းတော့မှာ မဟုတ်ပါထင်ရသော အဒေါ်၏ခါးတွင်ပေါက်သော အနာမှာနှစ်ချီခဲ့လေသည်။ တဖြည်းဖြည်းလှိုက်စားလာကာ အနာတွင်းနက် စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ရသည်။မိဘဆွေမျိုးများအာလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်။ဆရာစုံစွာ လက်လည်းကုန်လေပြီ။ အနာဟောင်းကြီး ဘောစကိုင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်မြန်မာဆေးတို့ဖြင့် ဆေးပေါင်းခနေသော အနာသည်အလွန်ပေါပေါ လမ်းဘေးတောတွင်ပေါက်သော ဘောစကိုင်းအရွက်ကကုစားပေးနိုင်ခဲ့လေသည်။ ဘောစကိုင်းရွက်ကိုခူးပြီး ရေစင်အောင်ဆေးကာ ကြေညက်အောင်ထောင်းပြီး အနာတွင် အုံပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တရွဲရွဲ […]
အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေပြပြီးဆေးတွေစားလာတာ ၂နှစ်ကျော် မပျောက်တဲ့ ဆီးချို သွေးချို တစ်လစွဲစွဲမြဲမြဲသောက်တာ ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ အမေသိန်းရဲ့ကိုယ်တွေ့ ဆေး
“ဆီးချို သွေးချို ကာကွယ်ဖို့ အစွမ်းထက် သင်္ဘောသီးစိမ်းရေနွေး နေ့စဉ်သောက်ကြစို့” ဆီးချို သွေးချို ကာကွယ်ဖို့ အစွမ်းထက် သင်္ဘောသီးစိမ်းရေနွေး နေ့စဉ်သောက်ကြစို့… ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းခေတ်စားလာသောဆေးမီးတို( ဆေးနည်းတို )တစ်ခုအကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။ ပုပ္ပားတောင်သို့ဘုရားဖူးသွားရင်းဆီးချိုတက်၍မေ့လဲကျသွားသော အမေသိန်း(နန်းရှေ့ကန်ကောက်သစ်ရွာ)မှဤနည်းကိုပြောပါသည်။ အမေသိန်းသည်ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများပြပြီးဆေးစားနေသည်မှာ၂နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ခါတိုင်းလည်းဆီးချိုတက်လျှင်မူးလဲနေကျဖြစ်ပါသည် ။ ပုပ္ပားတောင်စောင်းတန်းမှအမေကြီးတစ်ဦးမှသူ့ကိုပွေ့ချီထားခိုင်းပြီးသင်္ဘောသီးစိမ်းအဆင်သင့်ကိုခေါင်းပိုင်းမှဖြတ်အတွင်းမှအစေ့နုများကိုဇွန်းဖြင့်ခြစ်ထုတ်ပြီးနောက်ဆူနေသောရေနွေးအဖြူလောင်းထည့်ပြီးပိတ်ထားပါသည် ၁၅မိနစ်ခန့်ထားပြီးနောက်သွန်ငှဲ့ပြီးအနည်းငယ်အအေးခံ၍တိုက်ပါသည်။ သင်္ဘောသီးကိုလွှင့်မပစ်ရပါရေနွေးပြန်ပြန်ဖြည့်ပြီးတစ်နေကုန်၎ကြိမ်၅ကြိမ်အထိသောက်နိုင်ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့်အမူးရောဂါအမျိုးမျိုးသက်သာသည့်အပြင် သွေးယားရောဂါ။ […]
လိပ်ခေါင်းရောဂါကို အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေမဲ့ သဘာဝကုထုံးများ
February 17, 2018 Myit Ter 0
လိပ်ခေါင်းရောဂါကို အမြန်ဆုံးကုသပေးမဲ့ သဘာဝကုထုံးများ လိပ်ခေါင်းရှိသူတွေအတွက် ဒီနည်းလမ်းက သိပ်ကို အသုံးဝင်မှာပါ။ ဒီနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်နည်းနည်းကို စမ်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပက် ရှားစောင်းလက်ပက်ဟာ လိပ်းခေါင်းကို ကုသရာမှာ သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ သဘာဝကုထုံးပါပဲ။ ရှားစောင်းလက်ပက်မှာ ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေပါဝင်ပြီး ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ အပြင်လိပ်ခေါင်း (External Hermorrhoids) ခံစားနေရသူတွေအတွက် […]
February 8, 2018 Myit Ter 0
ထိပ်ခပ်နာဝေဒနာရှင်များအတွက်_၀မ်းမြောက်ဖွယ်……. မိမိသည် ထိပ်ခပ်နာ ရောဂါကို ငယ်စဉ်ကတည်းကနှစ်ရှည်လများ ခံစားနေရသူဖြစ်ပါတယ်ခုတလော အအေးမိ ဖျားနေသည့်အတွက် နှာသီးပိတ်ပြီး ညဘက်အိပ်လို့ပင်မရပါ… တစ်နေ့ပါပါးက ဆေးနည်းလေးတခုယူလာပါတယ်….စမ်းကြည့်ဖို့ပြောပါတယ်……….. ဆေးပေးတဲ့သူက အာမခံနဲ့ ဆယ်ယောက်မှာ ကိုးယောက်ပျောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်……….. ခုစမ်းကြည့်တာ တစ်ကြိမ်မှာပင် အတော်သိသာပြီး ယခုသုံးကြိမ်သုံးပြီးချိန်မှာတေ့ာအတော်ကောင်းမွန်သွားပြီ………. နှာရည် ပုပ်များ အတော်ကင်းသွားပြီး နှာချေလည်း […]
အစာအိမ် သမားများအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်း တလက်
January 23, 2018 Myit Ter 0
အစာအိမ်ရောဂါခံစားရသူများသည် အစားဆာလောင်ခြင်း မဖြစ်စေရန်အတွက် စားစရာများကို ကိုယ့်နှင့်မကွာ ဆောင်ထားကြသူ များကြပါသည် … သင်သည် ယခုဆန်ဆေးရည်ကို နေ့ စဉ်ပုံမှန်သောက်သုံးပါက အစားအစာဆောင်ရခြင်းနှင့် အစာအိမ်အောင့်ခြင်း နာခြင်းများ မရှိတော့ပါ ။ ကျောင်းတက်စဉ်က သူငယ်ချင်းများနှင့် မိတ်ဆွေများထဲ့မှ အစာအိမ်ဖြစ်သောသူများကို ပြောပြပြီး သောက်ခိုင်းခဲ့လို့အစာအိမ်သမား […]